NEWS | Food Magazine Myanmar | Page 2
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ဝက်နှစ်အခါသမယကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ Babett Yangon က စားမြိန်ဖွယ် ဝက်သားဟင်းလျာများကို ရောင်းချပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဟင်းလျာများ ရောင်းချပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြင်သစ်စားဖိုမှူးကြီး Christophe က တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဝက်သားဟင်းလျာများကို ....
Samyang Foods Myanmar မှ “ပြိုင်စားမယ်” (Let’s Challenge) ကို ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ကျင်းပခြင်း
Su Myat Mingalar Trading Company က Samyang ခေါက်ဆွဲစားပြိုင်ပွဲ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ ခေါက်ဆွဲစားပြိုင်ပွဲကို ကန်သာသာ စိန်ဂေဟာတွင် ပထမအကြိမ်၊ လှည်းတန်းစင်တာတွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ Capital Hypermarket ....
Premium Distribution မှ ဖြန့်ချိပေးနေတဲ့ Ferrero Rocher Chocolate ရဲ့ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးခြင်း အခမ်းအနား
၂၀၁၈ ခရစ္စမတ်နဲ့ နယူးရီးယားပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ်အဖြစ် City Mart, Ocean နဲ့ Market Place ဆိုင်ခွဲတွေမှာ Ferrero တစ်သောင်းဖိုးဝယ်ရင် ဘန်ကောက်ကို ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ခရီးစဉ် စရိတ်ငြိမ်းအဖြစ် ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးခဲ့ပြီး ကံထူးသူတစ်ယောက်ကို လက်မှတ်နှစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်အပို ခေါ်သွားခွင့်ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ....
ဆီဒိုးနားဟိုတယ် ရန်ကုန်တွင် နွေဦးပွဲတော်ဖြင့် ဝက်နှစ်အခါသမယကို ကြိုဆိုခြင်းနှင့် ချစ်သူများနေ့ အထူး Packages အစီအစဉ်များကို ဆင်နွှဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နွေဦးပွဲတော်အနေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာ ကံကောင်းခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ချမ်းသြွာကယ်ဝခြင်းတို့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းပြုပြီး မိတ်ဆုံညစာစားပွဲများကို ကျင်းပပြီး ကြိုခြင်းက အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆီဒိုးနားဟိုတယ် ရန်ကုန်အနေနဲ့ ....
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရန်ကုန်မှ “Be-Dazzled” နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရန်ကုန်မှ နှစ်ကူးအကြိုပါတီပွဲ “Be-Dazzled” ကို ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပါတီပွဲလေးမှာတော့ နိုင်ငံတကာမှ Tango, Jazz, Broadway နှင့် Hollyword အစီအစဉ်များ၊ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်နှင့် Oxygen Music Band တို့ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ....
The Strand Restaurant ကနေ မီရှယ်လင်းကြယ်ဆုနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း ဆုတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Meilleur Ouvrier de France ရရှိထားတဲ့ အစားအသောက် စာရေးဆရာပြင်သစ်စားဖိုမှူးကြီး Roland Durand နဲ့ အထူးသီးသန့်ညစာလေးကို ပေါင်းပြီး ဖန်တီးသွားမယ့် အကြောင်းလေး ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ စားဖိုမှူးကြီး ....
ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားဟိုတယ်မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူ Veuve Clicquot House က ထုတ်လုပ်တဲ့ နာမည်ကြီး ရှန်ပိန်ဝိုင်များနဲ့ တွဲဖက် ဖိုင်းဒိုင်းနင်း ညစာ Veuve Clicquot Dinner ကို တည်ခင်းခဲ့ပါတယ်။ ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူ Wine Maker ....
တတိယအကြိမ်မြောက် ၂၀၁၈ စင်ကာပူပွဲတော်ကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ ဘိုကလေးဈေးလမ်းမှာ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစားအသောက်၊ မြို့ပြဒီဇိုင်းနှင့် အနုပညာလက်ရာများ၊ ဂီတနှင့် ရုပ်ရှင်စသည်တို့မှတစ်ဆင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ရန်ကုန်မြို့သူ၊ မြို့သားများသိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စင်ကာပူခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့က ကြီးမှူးပြီး ....
ဆူးလေရှန်ဂရီလာမှ ချက် (Czech) အစားအစာပွဲတော်
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတဲ့ ချက် (Czech) အစားအစာများကို ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ရှိ Café Sule မှာ စားဖိုမှူးကြီး Jiri Vanecek က အထူးချက်ပြုတ် တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီချက်အစားအစာပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး မီဒီယာမိတ်ဆက်ပွဲလေးကိုတော့ ....
ဆီဒိုးနားက ဝိုင်တွဲဖက်ညစာ New World vs Old World Wine Pairing Dinner
by May Phyo Thi for Food Magazine နိုဝင်ဘာလရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့လေးက ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရန်ကုန်နဲ့ Superunda တို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ New World vs Old World ပွဲလေးတက်ရောက်ဖို့ Food Magazine ကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ....
မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(ရန်ကုန်ဇုန်)မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် MRA Connect “F&B START-UP VENTURE”
မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ရန်ကုန်ဇုန်) မှ ကြီးမှူး ကျင်းပသည့် MRA Connect “F&B START-UP VENTURE” ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်လောကထဲသို့ ဝင်ရောက်လိုသော ....
တတိယအကြိမ်မြောက် စင်ကာပူပွဲတော်ကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ ဘိုကလေးဈေးလမ်း မှာ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစားအသောက်၊ မြို့ပြဒီဇိုင်းနှင့် အနုပညာလက်ရာများ၊ ဂီတနှင့် ရုပ်ရှင်စသည်တို့မှတစ်ဆင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ....